Kunaka kwemvura yekudiridza
Hunhu hwemvura uye hunhu hwayo zvinokanganisa kukura kwechirimwa, chimiro chevhu pamwe nehurongwa hwekudiridzira pachahwo. Hunhu hwemvura yekudiridza hunoreva zvakanyanya kuumbwa kwayo uye makemikari, kana zvimwe muzvidimbu kune kuumbwa kwemaminerari uye nekuvapo o ...
Takaratidza sevaratidziri pa123rd Spring Canton Fair. Panzvimbo yekuratidzira, takagamuchira makambani anopfuura makumi matatu uye vatengi kubva kuMiddle East, India, Egypt, Europe neChina. Mukutaurirana, zvigadzirwa zvekambani zvakahwina nyasha yevatengi nemutengo wakanakisa uye yakakwira ...
Fekitori yedu nyowani yakatamiswazve muna Chivabvu 2015, iyo inofukidza 20,000 ㎡ nzvimbo yenzvimbo. Izvo zvivakwa zvinosanganisira kugadzirwa, imba yekuchengetera, uye hofisi nzvimbo, uye dzimba dzekugara. Yakashongedzerwa nemichina yepamusoro uye manejimendi anokwanisa, Greenplains ine chivimbo chekusangana nematambudziko epamusoro, uye nekugadzira ramangwana riri nani.